nyeinchanthu၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
Started this discussion. Last reply by ကိုကို Mar 20, 2013. 1 Reply 1 Like
5:45pm အချိန်သြဂုတ် 28, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
10:55pm အချိန်သြဂုတ် 28, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:50am အချိန်ဇန်န၀ါရီ 23, 2013, တွင် zawmintun မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဝိဥာဉ် လွင့်တယ်ဆိုတာ ဗုဒွ့ဘာသာမှာမရှိပါ ဒါဟာ ဘာသာခြားတွေရဲအယှုဝါဒပါ ဝိဥာဉ်ဆိုတာသေပြီးဟိုပြောင်းဒီပြောင်းလိုမရပါ ဝိဥာဉ်ကို မြန်မာလိုပြန်လိုက်ရင်တွေးတောသိစိတ်လိုရပါတယ် အဲစိတ်ဆိုတာက အမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်နေတာပါ တခုသောစိတ်ပေါ်ပြီးရင် နောက်ထပ်တခုပေါ်လာတယ် အဲနောက်ထပ်တခုပေါ်တဲအချိန်မှာ အရင်စိတ်ကိုအကဲခတ်ကြည်လိုက်ပါ မရှိတာကိုတွေရပါလိပ်မည့် ဘာဖြစ်လိုလဲဆိုရင် စိတ်ဆိုတာက တချိန်တည်းမှာနှစ်ခုဖြစ်လိုမရပါ ဒီတခုခူပ့်ပြီးမှဒီတခုပေါ်ရတာပါ အဲတာကြောင့်ဘယ်လိုလုပါပြီးဝိဥာဉ်လွင်လိုရပါမလဲအမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်နေတာကို သေတာဆိုတာလဲ ပထမစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး နောက်ထပ်စိတ်မလာရင်သေတာပါဘဲ သေပြီးရင်လဲ အခုလက်ရှိ ဒီဘဝနဲ နောက်ဘဝကြားမှာ ဝိဥာဉ်ဆိုတာဘယ်မှသွားလိုမရပါ သေပြီးရင်ဟိုဘက်ဘဝကိုတခါတည်းတန်းသွားဖြစ်တာပါ တစ်စက္ကာန်တောင်မကြာပါ ဝိဥာဉ်ဏခနွ့ာလိုပဲ ကျန်တယ် ခနွ့ာလေးပါးလဲအတှုတှုပါ ခနွ့ာငါးပါးလုံးဟာအမြဲတမ်းဖြစ်လိုက်ပျက်လိုက် ဒုက္ခသစ္စာပါ ဒီလောက်ပဲကျနော်လဲနားလည်အောင်ရှင်းပြနိုင်ပါတယ် နောက်ထပ်မရှင်းရှိရင်လဲမေးပါ ကိုကိုယ်တိုင်လဲလေ့လာပါ ကျေးဇှုးတင်ပါတယ်http://www.sanninaymin.com/ ဒီမှာလဲလေ့လာကြည်ပါ